To the Slaughter - British lions come up lambs in Woolwich. By Mark Steyn
ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုချိန်မှာနိုင်ငံသားအဖြစ်တည်ရှိနေသူတွေ ကိုဥပဒေအရ အကာအကွယ် ပေးရမယ်
၀န်ကြီးချုပ်ပြုတ် ခင်ညွန့် ရဲ့ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု
#wolfsburg #germany #day #spring #skypainters #de
Shopping kat Wolfsburg premium outlet… Rafa dapat sandals Nikel RM60 ajer! Yay!
BBC News - Bigotry against Jews and Muslims on the rise, says US
Exiled cleric who taught UK knifeman praises 'courage
Posted: 25 May 2013 10:33 AM PDT
Malaysians rally against 'electoral fraud' - Al Jazeera English
Posted: 25 May 2013 07:34 AM PDT
Read more about the war in Mail: Al Qaeda Wants Africa: Are the French in Over Their Heads in Mali?
Posted: 25 May 2013 07:25 AM PDT
If you're thinking of getting steamed over all that, don't. Simon Jenkins, the former editor of the Times of London, cautioned against "mass hysteria" over "mundane acts of violence." That's easy for him to say. Woolwich is an unfashionable part of town, and Sir Simon is unlikely to find himself there of an afternoon stroll. Drummer Rigby had less choice in the matter. Being jumped by barbarians with machetes is certainly "mundane" in Somalia and Sudan, but it's the sort of thing that would once have been considered somewhat unusual onasunny afternoon in south London — at least as unusual as, say, blowing up eight-year-old boys at the Boston Marathon. It was "mundane" only in the sense that, as at weddings and kindergarten concerts, the reflexive reaction of everybody present was to get out their cell phones and start filming.
This passivity set the tone for what followed. In London as in Boston, the politico-media class immediately lapsed into the pneumatic multiculti Tourette's that seems to beachronic side effect of excess diversity-celebrating: No Islam to see here, nothing to do with Islam, all these body parts in the street areadeplorable misinterpretation of Islam. The BBC's Nick Robinson accidentally described the men as being "of Muslim appearance," but quickly walked it back lest impressionable types get the idea that there's anything "of Muslim appearance" aboutaguy wavingamachete and saying "Allahu akbar." A man is on TV dripping blood in front ofadead British soldier and swearing "by Almighty Allah we will never stop fighting you," yet it's the BBC reporter who's apologizing for "causing offence." To David Cameron, Drummer Rigby's horrific end was "not just an attack on Britain and on the British way of life, it was alsoabetrayal of Islam. . . . There is nothing in Islam that justifies this truly dreadful act." Pages 12Next › Continue to Page2of the National Review
Posted: 25 May 2013 09:47 AM PDT
\_ LAPORAN Malaysiakini
Posted: 25 May 2013 02:15 AM PDT
ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ လူမျိုး ကိုးကွယ်ရာဘာသာကိုလိုက်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုမပြုလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့
အချက်ပါပါတယ်ဒါ့ အပြင် ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုချိန်မှာနိုင်ငံသားအဖြစ်တည်ရှိနေသူတွေ
ကိုဥပဒေအရ အကာအကွယ် ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ အချက်လည်းပါ ပါတယ်ဆိုတော့ ၂၀၀၈ အခြေံဥပဒေ
ဟာလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု နဲ့ အတည်ပြုခဲ့ သလား ဒါမှမဟုတ် ဇွတ်အတည်ပြုခဲ့ သလားဆိုတာကို ဒီနေ
ရာမှာအကျယ်မပြောတော့ ပါဘူး Social contract လို့ ခေါ်တဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲ မှာပါတဲ့ အ
ခြေခံ အခွင့် အရေးတွေပြည့် နေပြီလားဆိုတာ ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့
တဲ့ အဓိကရုံးတွေကိုလေ့ လာကြည့် ရင် ထင်းကနဲပေါ်လွင်နေပါတယ်မိမိလက်နဲ့ ရေးပြီးမိမိလက်နဲ့ ပဲ
ပြန်လည်ခြေဖျက်နေတယ်လို့ ပြောရင် အနာပေါ်ဒုတ်ကျသလိုဖြစ်နေမလားပဲ
Posted: 25 May 2013 02:02 AM PDT
အဲဒီ ၀န်ကြီးချုပ်ပြုတ် ခင်ညွန် ကောင်းကြောင်း ၀ါဒဖြန့် မီဒီယာတွေထဲမှာ ပြည်ပမှာ ဒီမိုကရေစီလစာ စားပြီး တိုင်းပြည် ကယ်တင်မယ် ဆိုတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင် အခြေစိုက် ဧရာဝတီနဲ့ အိန္ဒိယ အခြေစိုက် မဉ္စိမ သတင်းဌာနတို့ ရှေ့ တန်းက ပြေးနေတာ တွေ့ ရသည်။
ပြည်တွင်း မီဒီယာတွေပြန်ကြည့်ရင် ထောင်တွင်းမှာ အကျဉ်းသား ဘ၀နဲ့ သေဆုံးသွားသူ ၀န်ကြီးချုပ်ပြုတ် ခင်ညွန့် နဲ့ အမှုတွဲ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းအောင်ရဲ့ သား အယ်ဒီတာချုပ် လုပ်တဲ့7Day Journal တို့ Favourite News စတဲ့ အမြီးစားဖက် ခေါင်းစားဖက် မီဒိယာတွေမှာ စကိုင်းနက် ရုပ်သံလွှင့် လိုင်းတွေမှာ မြင်နိုင်သည်။
ဒေါက်တာ တင်ထွန်းဦးရဲ့ပြည်မြန်မာ ဂျာနယ်တွင်မူ တိုင်းပြည်ကိုချစသော မြန်မာ နိုငငံသား တဦးပီသစွာနေထိုင်ပြီး အမျိုးသား စိတ်ဖြင့် နိုင်သ၍ တိုင်းပြည်အတွက် လုပ်ဦးမည်ဟု ဆိုပြန်သည်။ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဟူသောစကားကို ဦးခင်ညွန့်သည် ၀န်ကြီးချုပ်ဘ၀၊ MI စစ်ထောက်လှမ်းရေး ညွှန်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် အာဏာရူးကောင်းစဉ် အမြှုပ်ထအောင် ပြောခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ယခု အရူးထကာ သတိလက်လွတ် ပြောပြန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ထင်သည်။
ဦးခင်ညွန့် ဘယ်သူလည်း (စုစည်းတင်ပြချက်)"- ယူရီ -
-၂၃ ။-၅ -၂၀၁၃
ဦးစွာ ဒီစာကို forward mail တစ်စောင်က နေရရှိထားတာပါ လို့ ဝန်ခံ ပါရစေ ။
သို့ သော် ရေးထားတာ တွေ က သမိုင်း အမှန် တွေ ဖြစ်နေတာရယ် နောက်ပြီး လူ အတော် များများက မသိသေးတာ ၊ မေ့သွားတာ ၊ မသိလိုက်တာ လေး တွေ လည်း ပါလို့အားလုံး ၊ အထူးသဖြင့် ခုနောက် ပေါက် ခလေး တွေ သိသွားအောင်လို့ဒီကနေ ပြန် ရှယ် လိုက် ရခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒေါသထွက်လို့အာဂါတ ထားလို့ မဟုတ်ရပါဘူး သို့ သော် သမိုင်း ကတော့ သမိုင်းပါဘဲ ။
အဲဒီသမိုင်း ကိုလည်း ပြန်လည် ပြုပြင် မွန်းမံ လို့မရတဲ့ အတွက် သမိုင်းအမှန် တွေကို အမှန်အတိုင်း သိရှိကြစေရန် သာ ဖြစ်ပါကြောင်း ။
" ချစ်သော ယူရီ မြင့်မိုဦး"
ဦးခင်ညွန့်ကို လွှတ်လိုက်တာဟာ သူတို့ ကို လူတွေက ဘယ်လောက် ခွင့်လွှတ်နိုင်လဲ ဆိုတာ စမ်းသပ်ကြည့်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ ဒီလောက် ဆိုးခဲ့တဲ့လူဟာ ပြန်လည် ထင်ပေါ်လာနိုင်သေးလား ဆိုတာ စမ်းကြည့်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
သူလုပ်ခဲ့ တာ ကောင်းခဲ့တာတွေရှိတယ် ဘာဘာညာညာ။
မြန်မာပြည် ဒီလောက် ဆိုးရွားသွားခဲ့တဲ့ အဓိက တရားခံ ထဲမှာ သူပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ပြုတ် ခင်ညွန့်နှင့် "အာဏာရှင် ပြည်ဖျက် လက်မရွံ့စစ်သူုခိုး စနစ် အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သူ ဦးနေ၀င်း"
— တရားခံ နံပါတ် ၁ ဟာ ဦးနေ၀င်းဆိုရင် တရားခံ နံပါတ် ၂ ဟာ ဦးခင်ညွန့် ပဲ။
— ၈၈ မှာ အတိုက်အခံ တွေဘက်က ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ ဖို့နှောင့်နှေးခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေမှာ သပိတ် တန်ပြန်ရေး ဖော်ဆောင်သွားတာ သူ နဲ့ ထောက်တွေပဲ။
— ၈၈ မှာ ခေါင်းဖြတ်ပြ၊ စက်ရုံတွေဖောက်ပြ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆိုတဲ့ ဘက်ကို လုပ်ပြသွားတာသူပဲ။
အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့ တချို့ လူငယ်တွေ ၈၈ မှာ တပ်မတော်က ကယ်တင်လိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ရဲ့အလှည့်စားခံလေးတွေ ဖြစ်သွားတာပဲ ။
— ဒီနောက်မှာ သပိတ်နှိမ်နှင်းရေးတွေကို လူမဆန်အောင် ကြူပင်ခုတ် ကြူငုတ် မကျန် လုပ်ခဲ့တာသူပါပဲ။
— ရေကြည်အိုင် လိုမျိုး နာမည်ဆိုး နဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ စစ်ကြောရေးစခန်းတွေက ငရဲခန်း နှိပ်စက်ခန်းတွေဟာ သူ့ စနက်တွေချည်းပါပဲ။
— ဆိုင်ကယ် မောင်းခိုင်းတာ က အစ သောက်တဲ့ ရေထဲ မာကျူရီထည့်ပြီး ဦးနှောက်ပျက်အောင် လုပ်တဲ့အထိ ဆိုးရွားခဲ့တာသူပါပဲ။
— ရေကြည်အိုင်ကို ၀င်သွားတဲ့ သူမှန်သမျှ အကောင်းအတိုင်းပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတာ အလွန်ရှားပါတယ်။ လူမသိ သူမသိ လက်လွန်သွားတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ ရေတွက်လို့ မရပါဘူး။ ။
— တကယ်တော့ မြန်မာ တပြည်လုံးကို အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ မျိုးကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ မလုပ်တတ်ခဲ့ပါဘူး။
— ညအချိန် မတော် အိမ်တံခါး လာခေါက်ပြီး ညီလေး အစ်ကိုတို့ နဲ့ ခဏလိုက်ခဲ့ပါ။ လို့ဘယ်တော့ များ အခေါ်ခံရမလဲ ဆိုတဲ့ — အကြောက်တရားမျိုးကို လူတွေစိတ်ထဲ ရိုက်သွင်းခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပါ။
နိုင်ငံရေး ဆိုတာ လုပ်တာနဲ့ သချိင်္ုင်းကုန်းပဲ ပြေး မြင်အောင် လုပ်ထားတာ သူပါ။ စစ်သားတွေဟာ မျက်ကန်းမျိုးချစ်နဲ့ ငါတကောကော အမှားတွေလုပ် တိုင်းပြည်ကို စစ်တပ်လို အုပ်ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။
တကယ်တော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ ချည်းပဲဆို စစ်တပ်က ဒီလောက် ဖိနှိပ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် လို ပါးပါးနပ်နပ် နဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ စစ်သား မဟုတ်တဲ့ သူကြောင့် သာ စစ်တပ် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့် သူဟာ တပ်ထဲမှာ နေရာပေးခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။ ဦးနေ၀င်း ဆင်းပြီး သူ့ သြဇာခံတွေ လဲ ထည့်မရတဲ့ အဆုံးမှာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ကို နောက်ဆုံး လက်နက်အဖြစ် သုံးခဲ့တာပဲ။
အဲ့ဒိအချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ် စောမောင် ဆို တာရုပ်သေးပဲ။ နောက်က တကယ် လှုပ်ရှားခဲ့ တာ တွင်း ၁ ၊့တွင်း ၂ နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်မျိုးညွန့် တို့ ပဲ။
အဲ့ဒီ ၃ ယောက်မှာ စီမံခန့်ခွဲသူက ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ပဲ။ ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေကိုလဲ အစက ဟန်ပြ အဖြစ် တင်ခဲ့တာပဲ။
နောက်မှ သူတို့ အပေါ်ရောက်သွားလို့ ခံလိုက်ရတာ။ သေနတ်ရှိမှ နေရာမြဲတဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာ စစ်ကောင်းကောင်း မတိုက်တတ်၊ စစ်တပ်ကျောထောက် နောက်ခံ မရှိတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဟာ သူ့ အခြေအနေ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။
ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေး အုပ်စုတွေနဲ့စစ်ပြေငြိမ်းရေးလုပ်တာကို ဘန်းပြပြီး ဘိန်းမှောင်ခိုအဖွဲ့ ၊လက်နက်ကိုင် သူပုန် အဖွဲ့ တချို့ ကို ငြိမ်း အဖွဲ့ တွေ အဖြစ်ဖန်တီးပြီး ကျောထောက် နောက်ခံရအောင် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုးကန့် တို့ဟာ မြန်မာ လူမျိုးထဲတောင် ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ ပါတယ်။ သူ့ ကြောင့် ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေ သူတလူငါတမင်း လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
စစ်တပ် ကျောထောက်နောက်ခံ မရှိတဲ့ သူအဖို့ဒီလို ရည်ရှည် သွားတာ ဟာ နောက်ဆုံး သူ ဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာပါတယ်။ စစ်အစိုးရ အနေနဲ့ ရည်ရှည်သွားတာဟာ မကောင်းဘူးလို့ အစောဆုံး သဘောပေါက်တာလဲ ပါမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု ပုဆိုးဝတ် စစ်သားကြီးတွေ ကပြနေတဲ့ ဇာတ်ကို သူက အရင် ရေးသွားခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာသာ သူ့ ကို ပေးကခဲ့ ရင် အခုပုဆိုးဝတ်ကြီးတွေကိုဗီလိန်နေရာထားပြီး သူက မင်းသားနေရာကနေ ကမှာကို မြင်ခဲ့လို့စင်ပေါ်ကနေ ကန်ချခံခဲ့ရတာပါ။ တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့် ဟာ စစ်သား စစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။
ရှေ့ တန်းတောင် ကောင်းကောင်း ရောက်ဖူးရဲ့ လား မပြောတတ်ဘူး။
စစ်တက္ကသိုလ် ဆင်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်သားတွေဟာ သေနတ်ကို သုံးပြီး ဥာဏ်နည်းနည်း နဲ့ ပဲ လုပ်တတ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဥာဏ်ရှိပြီး ကောက်ကျစ်တဲ့သူပါ။ ကဲ ဘယ်သူဟာ ပို ကြောက်စရာ ကောင်းလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။
သူလို လူမျိုးကို ကျနော်တို့ အာဃာဋ ထားစရာမလိုဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီအတွက်အချိန်မရှိလို့ ပဲ။
တခြား တိုးတက်ရေးလုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတိုးတက်ရေးမှာ ၀င်မနှောင့်ယှက်နိုင်အောင်တော့ သတိထားနေရမယ်။
သူလုပ်ခဲ့တာတွေကို တော့ မေ့မပစ်ပဲ ထပ်မခံရအောင် သင်ခန်းစာတော့ ယူရမယ်။
" မောင်ညီ MMCP"
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာဖြင့် လွတ်မြောက်လာသည့်နေ့ကး ဦးခင်ညွန့် နှင့် ဇနီးဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်ဝင်းရွှေအား သတင်းထောက်များနှင့် အတူ
၁-စစ်အစိုးရတတ်ခါစမှာ သူတဦးတည်းမှာ ပါဝါအပြည့်ရှိတယ်လို့ ပြောလို့ ရလောက်အောင်ကို ပါဝါရှိပါတယ်…အဲ့အချိန်က သူဆန္ဒပြကျောင်းသားတေNLD နဲ့ လူ့ ဘောင်သစ်ပါတီဝင်တွေ ကိုဘယ်လို့ ဘ၀တွေရိုက်ချိုးခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြန်ပြောပြဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး…မန္တလေး သံဃာ့အရေးအခင်း ကနေစပြီး သံဃာတွေကို ဘယ်လိုသူ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ပါသလဲ….
၂-အာဏာတည်ဆောက်ပုံ…ကြမ်းတဲ့နေရာမှာ သူ့ လောက်ဘယ်သူမှ မကြမ်းပါဘူး…သူ့ အထက်က ဦးစောမောင် ၊ သူ့ လယ်ဗယ်ထက် တဆင့်မြင့် ဦးမြင့်အောင်၊ဦးထွန်းကြည် တို့ အုပ်စု ၊သူတွေကို ဘယ်လိုရှင်းသွားလဲ… အဲ့အချိန်မှာ ဦးသန်းရွှေတောင် သူ့ ပါဝါသူအသာလေး စုနေရတဲ့အဆင့်ဘဲ ရှိသေးပါတယ်…
နောက် ဦးတင်ဦး ကေစ့်… မသေမချင်း လုပ်ကြံခံရတာ သူ့ ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တောင် သူအကာအကွယ် မပေးနိုင်ခဲ့တာဟာလည်း သူ့ ကိုယ်သူလုံလှပြီလို့ တော့ပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး…
နောင်သူ ဇွဲနေ၀င်းတို့ ဗယုတ်သုတ်ခ အလုပ်မှာတချက်၊ သူ့ လူတွေ လည်လွန်းပြီး -ချီးနင်းမိနေချိန်မှာ တချက်အခြေပျက်သွားလို့ သာ သူခံလိုက်ရတာပါ။
အဲ့တော့ သမိုင်းမှာ ဘယ်သူ တာဝန်အရှိဆုံးလည်းဆိုတာပေါ်လောက်ပါပြီ။ဦးသန်းရွှေက သူ့ လောက်မတော်ပါဘူး….ဦးသန်းရွှေ မဟုတ်တာလုပ်ရင် လူသိတာများတယ်…သူမဟုတ်တာလုပ်တာ လူသိပ်မသိဘူး…သူက ဆင်ဖြုမရှင်နဲ့ စုဘုရားလတ် ပုံစံ တဘက်ကပွဲခင်းပြီး တဘက်က လူသတ်တဲ့သူစားမို့ ပါ…
သူလုပ်သွားတာ အားလုံးဟာ ဆန်းဆန်းပြားပြားမပါပါဘူး…တကယ်တော့ သူသိပ်တော်ပါတယ်ပြောရင် ဗလလို ငမြောက်ငခြောက်ကောင်ကလည်း အဲ့လိုနေရာလေးသာ ရပစေ။
မြန်မာပြည်ကို အနှစ်၄၀လောက် ပိတ်ထားလို့ ရတယ်လို့ ကြွေးကြော်ချင်ပါတယ်…ဘာကြောင့်လဲ မေးရင်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေက မြန်မာလူမျိုးတွေမို့ ပါဘဲ….
အခုတောင် ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အရင်ထောက်လှမ်းရေးအတွက် အသုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ 7days- voice- eleven တို့ က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မင်းကိုနိုင် တပုံ သူ့ ပုံတပုံတင်ပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းနေပါပြီ…အားလုံးကလည်း ဘဘကြီးနေကောင်းလားတို့အရမ်းဝမ်းသာတာဘဲတို့ ဖြစ်ကုန်ကြရော….
ကျုပ်တို့ လူမျိုးကလည်း မေ့တတ်တာကို….၁၉၈၈ အရေးအခင်းဖြစ်တယ်…
အရေးအခင်းပြီးတာနဲ့အရပ်ထဲ နတ်ပွဲတွေနဲ့တခြိမ်းခြိမ်းပေါ့…မေ့ကုန်ပြီ…မသေတဲ့မိသားစုတွေက…၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်…မနက်ဖြန်ဘဲပေးမလိုလိုလုပ်နေလိုက်တယ်…
ကြားထဲမှာ ဖမ်းလိုက်တာ မနည်းမနော…အမှတ်မမှားရင် လွတ်တော်ခေါ်မယ်ကို ၁၉၉၁-၂နှစ်လောက်မှကြေငြာတာရွေးကောက်ပွဲပြီးတယ်… ၁၉၉၃ ညီလာခံခေါ်တယ်…
တနှစ်တကြိမ် တခါတလေ ၂-၃ကြိမ်ခေါ်တယ်… လူတွေဆူပူမှာဆိုးလို့မြို့ တော်ဝန် မာရသွန်…..ပြေးလိုက်ကြတာဘဲ…တီကို ကားရအောင်လို့ ….နအဖ ဖလား လှေသဘင်၊မြင်းခင်းသဘင်၊ ဟောပြီးတော့ အမျိုးသားအားကစားပွဲတော်၊ နောက်တော့ကျောင်းသားအားကစားပွဲတော်လုပ်ပေးတယ်၊
ဒါတွေဟာ ပုံမှန်ပါဘဲ…တကယ်တော့ အလှည့်တွေထဲမတော့ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ လူတယောက်အတွက် တကယ့်ကို ပုံမှန်ပါဘဲ…. အခုအွန်လိုင်းမှာဟော့နေတဲ့ မြန်မာ့အင်တာနက်ဖောင်ဒါဆိုတဲ့ စကားလုံး….မှားတယ်…
ပုဂံဆိုက်ဘာကို စလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုက သူ့ အတွက်ပါ။
သူ လုပ်ခဲ့တာ တကယ်တော့ ကကလှမ်းအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ… သူမလုပ်ရင် သူကျန်ခဲ့တော့မယ်… အဲ့နောက်ကနေမှ လူတွေမသုံးနိုင်တဲ့ ဈေး၊ လူတွေမသုံးနိုင်တဲ့ စပိဒ့်တွေနဲ့လူတွေကြားထဲ ချထားပေးလိုက်တာပါ… ဒါလည်း လေးစားလောက်စရာမရှိပါဘူး…
သူနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ သူတယောက်…သူ့ အလုပ် သူလုပ်ရမှာပေါ့… ဒါကျွန်တော်တို့ က ပိုပြီးချီးကျူးထောပနာပြုနေစရာ ဘာလိုလို့ လဲ….
ကောင်းတာကို ချီးကျူးခံချင်ရင်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသွား အလှူလုပ်ပါ… ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ်လှူ …ဘုန်းဘုန်းတွေ ပြောတဲ့ သာဓု ဆိုတာကို ပီတိခံပေါ့…
နောက် လူတွေပြောတဲ့ မာလ်တီမီဒီယာ… ဟားတိုက်တာ ရယ်ချင်ရဲ့…စက်ရှိတယ်..ရုပ်ပြ၊ အင်တာနတ်ကနေစာသင်မယ်တဲ့ မီးမလာဘဲ…အဲ့တော့ အဲ့တာတွေဟာ အပိုဆိုတာ သဘောပေါက်ပေါ့…ထမင်းကျွေးလို့ ထိုင်စားမယ့်လူကို ထမင်းသိုး ဟင်းသိုးကျွေးတာ ထုတ်ပြီး ချီးကျူး လောက်တဲ့သူဟာ ထမင်းသိုးဟင်းသိုးကြိုက်တဲ့သူဘဲဖြစ်မှာပေါ့…
နောက်တခု မိခင်နဲ့ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း… ဒါဟာ တပ်တွင်းအားပြိုင်ဖို့လောက်နေရာတခုပါ…
အဲ့လိုနေရာမှာ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ က မတိုးဘူးလေ… သူ့ မိန်းမက ဒေါက်တာ ဆိုတော့ ပိုပြီးလူဝင်ဆန့် တော့ ဒါကိုတည်ခဲ့တာဘဲ….
နောက် အတန်းပညာရေးကို ဘယ်လောက်ထိဖျက်ဆီးပစ်တယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ..
.မအောင်မနေရ အတန်းတင်ပညာရေးစနစ်ဟာ သူ့ ကြောင့်ပေါ်ထွန်းလာတာပါ။
အဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကထွက်လာတဲ့သူတွေ အခုအချိန်ထိ နိုင်ငံတကာမှာ ဘွဲ့ ခြင်းတူရင် ဒီပလိုမာခြင်းတူရင် ဘယ်သူက ခေါင်းမော့ရင်ကော့ ရပ်တည်နိုင်ပါသလဲ…
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မပြင်ထားရင် ဘာအဆင့်မှမရှိလောက်အောင် အနှိမ်ခံရပါမယ်… အဲ့လောက်ဆိုရင် သူ့ ဘာလဲသိလောက်ပါပြီ… သူဟာ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကြက်သမားဝင်းမြင့် ( ဦးလူချော မှန်ပါတယ်နော် ) ရဲ့ညီလို့ မပြောရဘူး
နိုင်ငံတော် သာယာဝပြောပြီး နိုင်ငံကြီးအေးချမ်းပါစေ…တဲ့ ( နည်းနည်းတော့ စကားလုံးကွဲနိုင်တယ် )အဲ့လိုဟန်ပါပါ မာန်ပါပါနဲ့ ဆုတောင်းလို့လူကောင်းထင်နေရင်တော့ မှားမှာပေါ့…
ကျွန်တော် အိမ်ကနေ ရှေ့ တပြက ဘုရားသူထီးတင်ခဲ့ သလို ကျွန်တော့်လမ်းထိပ်က ကကလှမ်းရုံးမှာလည်း သူ့ တပည့်တွေ ဗျင်းနေတာ ကိုယ်တွေ့ မျက်မြင်….
အဲ့တော့ မိချောင်းမျက်ရည် လို့ သာပြောချင်တယ်… သူ့ အကြောင်း ထဲကနေ ကောင်းတာလေးတခုနှစ်ခုလောက်တော့ ရှိတာပေါ့…သူ့ တပ်မတော်ဘ၀ နေ၀င်ချိန်မှာ အာဏာကို ပုံစံပြောင်းယူဖို့ အကြံနဲ့ဒေါ်စုကို သူက ဒီပရင်းမှာ ကယ်တဲ့ပုံစံ ချိုးယူတာမျိုး အာစီယံမှာ သူ့ တပည့် ဦးဝင်းအောင်ကို အလှည့်အပြောင်း လာတော့မယ် ဆိုတဲ့စကားထွက် စေတာမျိုး ကို ကြိတ်ပြီးချီးကျူးမယ်ဆိုရင်ပေါ့….
ဒါပေမယ့် ဒီလူဟာ ကျွန်တော်တို့ ပုံနှိပ်စက်သမားတွေပြောသလိုပြောရရင် မှင်အနက်ဘဲ…ဘယ်လိုမှင်နဲ့ မှ သူ့ ကိုအရောင်ပြောင်းလို့ မရနိုင်ဘူး…သူဟာ လူမကြမ်းဘဲ စိတ်ဓါတ်ကြမ်းတဲ့ အတွင်းကောက်သမားပါ…
" ကျေးဇူးဗလ (MMCP)"
ရွေဝါရောင်ရဲ့ အရှေ့မှာ ၉၆ ကျောင်းသားအရေးအခင်းဆိုတာ ရှိခဲ့တယ်ကွယ့်။
ဘယ်သူမှ အတိအကျမသိဘဲ လို့ ဆိုရအောင် အဲဒီကျောင်းသားတွေ မသေသေးဘူးကွယ့်။
အဲဒီသူကြီးလဲ အပြင်ဘက်မှာ အရှင်လတ်လတ်ကြီး ညွှန်ကြားနေတာကွယ့်။
လှည်းတန်းမှာနံနက်လင်းအားကြီး ကတ္တ၇ာလမ်းပေါ် ထိုင် လက်ချင်း ချိတ်တွဲထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို မီးသတ်ပိုက်နဲ့ အနီးကပ်အတင်းထိုးခွဲ ကားပေါ်ပစ်တင်ခိုင်းတာ အခုေ၇ွှဘိုထောင်က လွှတ်တဲ့ထဲပါတဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွှန့် လက်ရုံး ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အောင် တဲ့။
အဲဒီတုန်းက ဗမခ မဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်။
ထောက်လှန်းရေးတစ်စု ၇က်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့မန်းလေး သံဃာ့အရေးအခင်းဆိုတာလဲ မှီလိုက်သူတွေ ရှိသေးတယ်ကွယ့်။ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို မမိလို့ အမေနဲ့ နှမကို (အလယ်တန်းကျောင်းသူ တောင် မချန်) ထောင်ထဲဖမ်းထည့်ပလိုက်တာကော သူ တော်တဲ့အချက်လို့ ပြောဦးမလား။ မျှားခေါ်တတ်လိုက်တာ ပေါ့နော်အဲဒီတ၀ိုက် စစ်ထောက်လှမ်းေ၇းတွေ သတင်းပေးတွေ စိုးမိုးချိန်က လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်တောင် ဘော်ဘော်တွေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း အကောင်းအဆိုး နည်းနည်းတောင် မဟ၀ံ့ ၊ ကချင်ပုဆိုးတောင် မ၀တ်ရဲ၊ အိမ်မှာ အန်တီစုပုံ တောင် မထားရဲတဲ့ သာမန်ကျောင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀တွေ ရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါ ပုံပြင်တွေ ယုံတမ်းစကားတွေ မဟုတ်ဘူး။အမှန်က ဒီလူကြီးအကြောင်း ပြောဖို့ ၀င်လာတာမဟုတ်ဘူး။ ဖတ်၇တော့ လဲ မနေနိုင်လို့။ ………………………………………….. ………………
အဘညွှန့်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲတော့ မသိပါဘူး အဘညွှန့်ရဲ့ သားသမီး အမ်အိုင်တွေကြောင့် တနိုင်ငံလုံး ဇိမ်နန်းတွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဖွင့်ရဲလာတာတော့ အတော်ထင်ထင်ရှားရှားပဲ။
တဖက်ကနေ လှည့်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုရင် ကိုရင်ချက်ကြီးတို့ ပြည်တွင်းဖြစ် ကုန်ကြမ်းရစေဖို့ စတင်မိတ်ဆက် ကျေးဇူးပြုခဲ့တာ အဘညွှန့်ရဲ့ အမ်အိုင်တွေပဲ။
ဒါပေမဲ့ သူလွတ်ခြင်းမလွတ်ခြင်းကို ကျနော်တော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားမိပါဘူး၊
အကျဉ်းကျနေသူ လွတ်မြောက်တဲ့အတွက် မုဒိတာပွားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူဟာ တနိုင်ငံလုံး အကြောက်တရားနွံထဲ ဆွဲချခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကြီး တစ်ခုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက် ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းဆို ဖျောက်ဖျက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး ။
မခံခဲ့ရဘူးတဲ့သူတွေကတော့ ခံခဲ့ရတဲ့အမြင်ကိုဘယ်သိမလဲဗျ။မိသားစုတွေ သားတကွဲ၊မယားတကွဲ..ဖြစ်ခဲ့တာတွေ၊လူဘ၀သက်တမ်းတ၀က်လောက်ကို ထောင်ထဲမှာကုန်ဆုံးခဲ့ရတာတွေ၊ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်နေတာတောင် ကြီးလန့်စာစားနေခဲ့ရတာတွေ၊ ..ပြောရရင်တော့ ကုန်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး။
ဒီလို လူမျိုးကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့သူတွေ facebook ပေါ်မှာလဲ အတော်များသားကလား။
ဒီလူကြီးရဲ့လက်တံကတော်တော်ရှည်သေးတာတွေ့ရပါတယ်။(သူတပည့် ဟောင်းတွေ တော်တော်များများလဲ facebook ပေါ်ရှိနေတာသေချာတယ်)ထောက်လှမ်းရေး ဆိုတဲ့အတိုင်း ညဏ်နီညဏ်နက်၊ ကလိမ်ကကျစ်ညဏ်ကတော့ တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းရိုးအမှန်ပဲ။မြွေပွေးလိုလူမျိုးပါ။
ဒီလူကြီး အခုလို ထောင်ကျတာလဲ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် မဟုတ်ပါ။
(သူတို့အာ ဏာ ထိပါးမှာမြင်လို့လားမသိ)ခုတော့ မြွေပွေးတစ်ကောင်ပြန်လွတ်လာပြီပေါ့။
သူတို့တွေက ရန် ငါ ပြတ်တယ်။
ဒါကြောင့်လည်း သူတို့တွေက ပြတ်ပြတ်သားသား အသာစီးရ အပေါ်စီးကနေပြီး လုပ်ခြင်သလို လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ကျတော်တို့က မေတ္တာ ဂရုဏာ မုဒိတာ ဥပက္ခာတွေကို ကျင့်သုံးတယ်။
နည်းနည်း အသာစီးရလာရင် ဆက်ပြီး အနိုင်ယူဖို့၊ အမြစ်ပြတ် ခြေမှုန်းဖို့ ဆိုတာတွေကို စိတ်မ၀င်စားတော့ဘူး။
အားလုံး အတူတကွ လက်တွဲ့ နေထိုင်ရေးကို ပိုဦးစားပေးတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေ ထင်တိုင်းကြဲတာကို ခဏခဏ ခါးဆီးခံခဲ့ကြရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တော့လည်း ကိုယ်လည်း ရန် ငါ ပြတ်သူ ဖြစ်ခြင်လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ ငါဟာလူ၊ တိရစာန် မဟုတ်ဘူး လို့ ပြန်စဉ်းစားလိုက်မိရင် ရန် ငါ မပြတ်နိုင်သူ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
လူအဖြစ်ကို အဆုံးရှုံးခံပြီးမှ ရမဲ့ အနိုင် ထိုက်တန်ရဲ့လား တစ်ကယ်ကော လိုခြင်ရဲ့လားလို့ ပြန်စဉ်းစား စရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။
အခုအချိန်မှာ အခုလို လွှတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆိုက်ဝါးတွေ လုပ်နေတယ်လို ကျတော်လည်း ခံစားရတယ်။
ဇာတ်ရှိန်ကို မြှင့်သယ်သွားတယ်။ လူနည်းနည်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကိစ်စကနေပြီး လူအများ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကိစ္စ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ယူတယ်။ ပြီးမှ ဖြည့်ချလိုက်တယ်။
လူတွေ အားလုံး ရင်သပ် ရှုမောစရာ ဖြစ်သွားတယ်။
မြစ်ဆုံကိစ္စ အကျဉ်းသား လွတ်ပေးရေး ကိစ္စတွေမှာ သေသေချာချာ ပလန်ဆွဲပြီး ဒါရိုက်တာ ကောင်းကောင်းနဲ့ ရိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေလို ကျတော်လည်း အစ်ကို တစ်ချို့နဲ့ အမြင်တူတယ်။
သစ်တာကြီးပေါ် ကျောက်တုံးတင်ပြီး ပြန်ချပေးတဲ့ အော်ပီကျယ် ကာတွန်း အဓိပါယ်မျိုး ဆိုတဲ့ အဖြစ်မျိုးဆိုတာကိုလည်း လက်ခံတယ်။
ချုပ်ချုပ်ကြီးရဲ့ သမီးတော်တွေ ဌာနတွေ အားလုံးက တစ်ပြိုင်နက် ထွက်ပြီးမှ ဆိုတာလေးကို ပိုပြီးသိခြင်လာတယ်။
အစ်ကို သိထားတာတွေကို ရှယ်ပေးပါလား။ အခုတစ်လော မြောက်ပိုင်း ကျောင်းသားတပ်မတော် အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြုတ်ထုတ်သတ် အတွင်းရေးတွေ အရိုးတွန်နေတယ်။
ခွင်လွှတ်နိုင်သူတွေ ခွင့်လွှတ်လို့ ရပေမဲ့ သမိုင်းကိုတော့ မေ့လိုမရဘူး။ ပြင်လို့ မရသင့်ဘူး။ သမိုင်း အဖျောက် မခံသင်ဘူး။
အရေးယူတာ မယူတာ က နောက်တစ်ပိုင်း အမှန်အတိုင်း သမိုင်းမှာ ရှိကျန်ရစ်ဖို့ နောက်တစ်ပိုင်းပါ။ ထိုအတူ ဒီပဲယင်းဆိုတာလည်း လူအများအပြား လူမသိသူမသိ၊ လူလိုသူလို မဟုတ်ဘဲ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ အရေးအခင်းပါ။
ခွင့်လွှတ်နိုင်သူတွေက အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ရှေ့ရှု ခြင်ချိန်ပြီး ခွင့်လွှတ်အုန်းတော့ သမိုင်း မှတ်တမ်း အမှန်အတိုင်း အပြည်အစုံ ရှိသင့်တယ်။ နောက်လူတွေလည်း သိသင့်တယ်။
အခုဘဲကြည့် ဘာမှ မကြာသေးတဲ့ နှစ်ကာလတွေတုန်းက လုပ်သွားတဲ့ ညောင်နှစ်ပင်တောင့် မသိသူတွေ ရှိနေပြီ။ မအအောင်လို့ သမိုင်းသင်တာပါ ဆိုတာ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းရဲ့ စကား ပြန်အမှတ်ရကြပါ။
ဦးခင်ညွှန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းကြောင်းတွေ ကောင်းသလား ဆိုးသလား တော်သလား ဆိုတာတွေ ဆွေးနွေးခြင်ရင် နိုင်ငံရေး သရက်ထဲမှာ သူအမည်နဲ့ သီးခြား တစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲသည်ဖက်မှာ ဆိုရင် ပိုပြီး သင့်လျော်လေးမလားလို့ အကြံပေးတာပါ။ကျတော် ဂရုပြုမိသလောက် အမည်ကျော်တွေထဲမှာ ကိုယ်ကိုကိုယ် publicity ဖြစ်အောင် promotion ကို သေသေချာချာ စဉ်စားပြီး စနစ်တစ်ကျနဲ့ အချိန်အကုန်ခံပြီး လုပ်ယူတဲ့လူ နှစ်ယောက်ကို တွေမိတယ်။
တစ်ယောက်က ကျော်ဟိန်းပါ။ သူ ဘုန်းကြီး မ၀တ်ခင် နှစ် အနည်းငယ်အလိုမှာ နှစ်ရှည် ပလန်ချပြီး စနစ်တစ်ကျ လုပ်သွားတာပါ။
နောက်တစ်ယောက် အခု မြို့ မေတ်တာ ခံယူနေသူကြီးပါ။
လူတွေဟာ တစ်ခုခုကို အများထဲက ရွေးရတော့မယ် ဆိုရင် ယဉ်ပါးနေတဲ့ ကြားဘူးတဲ့ အရာကိုဘဲ ရွေးတယ် ဆိုတာ စနစ်တကျ လေ့လာချက်များမှာ တွေ့ရှိရတဲ့ လူအကျင့်ပါ။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ပစ်စည်းကို ကောင်းတဲ့ ကိစ်စနဲ့ တွဲပြီးတော့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတဲ့ကိစ္စနဲ့ဘဲ တွဲပြီးတော့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လူတွေရဲ့ မျက်စီထဲကို နားထဲကို ခေါင်းထဲကို ထပ်ခါတလည်းလည်း ၀င်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။
အဲဒီလုပ်ထားနိုင်ရင် အဲသည်လူဟာ တစ်ခုခုကို ရွေးရတော့မယ်ဆိုရင် မသိစိတ်ကနေပြီး သူမကြာခဏ ကြားဘူးနေတဲ့ အမည်ကိုဘဲ ရွေးတော့တယ် ဆိုတာ အခြေခံ မာကက်တင်း နိယာမ တစ်ခုပါ။
ဒါကို တီဗီမင်းသားကြီးက ကောင်းကောင်း နားလည်ပုံ ရပါတယ်။
လူမကြိုက်တဲ့ ပစ်စည်းကို လူကြိုက်များတဲ့ ပစ်စည်းနဲ့ တွဲထုတ်တာ ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ မဆလ မာကက်တင်း နည်းစနစ်ပါ။
လူအများရဲ့ အသက် သွေး ဘ၀ မျက်ရည်တွေနဲ့မှ စားပျော် အိပ်ဝင် ပြီး လူလုပ်ခဲ့သူတွေကို လွှတ်ပေးရင် လူထုက လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိလို့ လူထုကြီးက အောင့်သက်သက်နဲ့ စိတ်လျော့ပြီး လက်ခံ သွားရအောင်လို့ အခုလို တွဲပြီး ထုတ်လိုက်တာပါ။ " အောင်အောင်ဦး ခင်ရတနာ(facebook)မှ"
ဒေါ်စုကုို အပျော့ဂုိုဏ်းခင်ညွန့်က စကားပြောချင်နေတာ ။
ခေါင်းမာတဲ့သန်းရွှေကြောင့်ဆုိုပီး ဆရာတပဲ့ နှစ်ယောက် အပျော့ဂုိုဏ်း အမာဂုိုဏ်း ဖန်တီးပီး လူထုကုိုလိမ်။ သံတမန်တွေကုို လိမ်။ ကမ္ဘာကုို လိမ်ခဲ့တာ ခင်ညွန့်ပါ။
ထောက်လှမ်းရေးတွေကို သန်းရွှေက လုိုက်ဖမ်းတော့ နယ်စပ်က ထောက်လှမ်းရေးတွေအိမ်မှာ ရွှေတွေ ပိသာများစွာဖမ်းမိတယ်။
ဒေါ်လာတွေမြောက်များစွ နံရံမှာမြုတ်ထားတယ်။ ထူးခြားတာက ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေရဲ့ ဘုရားစင်တွေမှာ ဘုရားမရှိဘဲ ခင်ညွန့်ဓါတ်ပုံကြီးသာ ရှိပါသတဲ့။
ခင်ညွန့်ပြုတ်တာ ၂၀၀၄ နှောင်းပုိုင်းပါ။ မပြုတ်ခင်လပုိုင်းအလုိုမှာ ခင်ညွန့်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး တဖွဲ့လုံးကုို ဒေါက်ဖြုတ်ရာမှာ အဓိကဇာတ်ကောင်လုိ့ စွပ်စွဲခံရတဲ့ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းက သူ့မယားငယ် ရီရီသာကုို အမေရိကန်ပုို့ပါတယ်။
ရီရီသာက အမေရိကန်ကုိုဝင်တဲ့နေရာမှာ ကျော်ဝင်းခုိုးဝှက်ထားတဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ (ဆယ်ဂဏန်းလုို့ နီးစပ်သူတွေက မှန်းပါတယ်) နဲ့ ၀င်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က ၀ါရှင်တန် မြန်မာသံရုံးမှာ ရှိနေတုံးပါ။
ဒါကြောင့် ရီရီသာ အမေရိကန်မှာ အခြေချဘုို့ အောင်လင်းထွဋ်က အကုန်စီစဉ်ပေးပါတယ်။
အောင်လင်းထွဋ် သံရုံးက ခုန်ချပီး အမေရိကန်မှာ နိုင်ငံရေး ခုိုလှုံခွင့်တောင်းတဲ့အခါ ထောက်လှမ်းရေး ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်း မယားငယ် ရီရီသာအိမ်မှာ ခဏ နေပါတယ်။
ဒေါ်စုကျေးဇူးကြောင့် အမေရိကန်က ဆန်ရှင်တွေ ဖွင့်ရင် ထောက်လှမ်းရေးဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဝင်းလဲ အမေရိကန်က မယားငယ်နဲ့ ပြန်ပေါင်းထုတ်။ ခုိုးထားတဲ့ ဒေါ်လာတွေနဲ့ စည်းစိမ်ခံနုိုင်မှာမုို့ ဟန်ကုိုကျလုို့။
ကနေ့ အမေရိကန်အစိုးရက အောင်လင်းထွဋ်ကုို လုံးဝ နုိုင်ငံရေးခုိုလှုံခွင်မပေးပါ။
အမေရိကန်မှာ နေခွင့်သာပေးတယ်လုို့ နုိုင်ငံခြားသတင်းတခုမှာ ဖတ်ရတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကုို တချိန်က နှစ်ပြားမတန်အောင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာကနေ ဆောင်းပါးမျိုးစုံနဲ့ အပုတ်ချခဲ့တာ ခင်ညွန့်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေဆုိုတာ မေ့ကုန်ပလား။
ဒေါ်စုနဲ့ အန်အယ်ဒီကုို အောက်လမ်းနည်းမျိုးစုံနဲ့ တုိုက်ခဲ့တာ ခင်ညွန့်ပါရှင့်
ခင်ညွန့် ဘယ်သူလည်း (စုစည်းတင်ပြချက်)
Published by: ယူရီ on 20th Jan 2012 | View all blogs by ယူရီ
ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ အမှန်တွေကြည်ပါဘဲ ။
မယူ၇ီေ၇ ရှင်တိုကျွန်မတို့ ဒီနေ့ထိုင်းနိူင်ငံလား အလုပ်တွေလုပ်နေကြ၇တာလည်း သူတို့စနက်ပေါ့ရှင်။
မှတ်မိသေး သရှင့် ခင်ညွှန်၇ဲ့ ပညာေ၇းအနှစ်၃၀ စီမံကိန်းဆိုတာ လူကြီးသူမတွေကတော့ ပြောကြတယ်ရှင့် ။
အဲ့တုံးကပေါ့ ဟာ..ဒါဆိုစစ်တပ်က အနှစ်၃၀ကြီးတောင်အုပ်ချုပ်မှာလား သေပါပြီ….တဲ့။
မှတ်မိတာ ပြောပါတယ် ။
ခင်ညွှန်က သူလက်ထက်မှာ ပြည်နယ်တိုင်းအသီသီမှာ အဆင်မြင့်တက္ကသိုလ်တွေဖွင့်ပြီး ဒေသတိုးတက်အောင်လုပ်မတဲ့ လုပ်တော့လုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင် ။
သိုသော်လည်းဘဲ ခင်ညွှန်က အုတ်ခဲနဲ့ ဘိလပ်မြေရှိရင် တည်ထောင်လို၇တယ် တွက်တာကို..ရှင့်။
အဲဒီကနေဘွဲယူလာတဲ့သူတွေကို သူဘွဲအလိုက် သင်တော်တဲ့နေ၇ာ ပေးစ၇ာမှမရှိတာ ။
ဒီတော့ လမ်းဘေးမှာ ဘွဲ၇ဆိုက်ကားသမား ဘွဲ၇အကျော်သည် ဘွဲ၇အုတ်သဲကျောက်ထမ်း ဒါတွေမလုပ်ချင်တော့ ကျွန်မတို၇ဲ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်နိူင်ငံ မလေးရှားတွေကို သွားအလုပ်လုပ်ကြတာ ရှင်တိုကျွန်မတိုအမြင်ဘဲ ။
လူငယ်တွေသန်းချီ (ခန်မှန်းချေ ၁၅သန်း)ပြီး ၇၇ာအလုပ် သူနိူင်ငံသားမလုပ်ချင်တဲ့ အောက်ခြေအလုပ်ကို အောက်ဈေးနဲ့လုပ်ကြ၇တာ အောက်ဈေးဆိုပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်းပြည်ထက် မိသားစုလုံ လောက်အောင်ကြွေးနိူင်သဟဲ့ ဆိုပြီးနေနေကြ၇တာ။
တ၇ားမဝင်သူက ကျီးလန့်စားစားနေ၇တာ။မွန်ပြည်နယ်၊ ကု၇င်ပြည်နယ်၊ တနင်သာ၇ီတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်အရှေပိုင်းက မြိုတွေမှာဆို ခလေးငယ်နဲ သက်ကြီးရွှယ်အိုသာ ကျန်နေခဲ့ပြီး လူငယ်အများအပြားဟာ တဖက်နိူင်ငံကိုထွက်အလုပ်လုပ်ကျ၇တာလေ
ဒါတွေဟာ သူတိုစနှက်တွေပေါ့ ဘယ်သူမှ အိုးပြစ်အိမ်ပြစ် မျက်နှာငယ်နေ၇တဲ့ဘဝကိုမလိုလားကြပါဘူး။
ဒါပေတဲ့ ခင်ညွှန်ဆိုတဲ့ကေါင်က အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်သူတွေကို ပြည်ပအားကို ပုဆိန်ရိုး ဘာညာ လုပ်ချင်သေးတာလား အထက်ကပြောသလိုဘဲ ခင်ညွှန်ဟာ မြန်မာပြည်သားတွေကိုနည်းမျိုးစုံနဲနှိပ်စက်ခဲ့တာ အနဲနဲ့အများ ခံ၇သူကြည်ပါဘဲရှင်။
ဒီလို ၇က်စက်တဲ့သူတစ်ယောက်ကို သနားတဲ့သူတွေ အတွက်တော်တော်ဘဲ အံသြမိပါရဲ။
တထပ်နဲ့ မမှတ်မိလို နောက်တစ်ထပ် အရိုက်အနက် ခံချင်ကြတယ်တူသပ။
မိတ်ဆွေအားလုံးကို ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောချင်ပါတယ်ရှင် ။
နိူင်ငံတော်ကိုချစ်လျှင် ဒီလူသတ်ကေါင် ခင်ညွှန်ကို လက်လှမ်းမှီသလို ဆန်ကျင်ရူတ်ချ စေချင်ပါသည်ရှင်။
ဟစ်တိုင်သည် လွတ်လပ်မျှတသော စာမျက်နှာ ဖြစ်ပါ၍ တုန့် ပြန် ဆောင်းပါး ရေးသား ပေးပို့လာပါက ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးပါမည်။ ရိုင်းစိုင်းမှု၊ ပုတ်ခတ်မှုများ ရှောင်၍ ဒေါသ ကင်းစွာ။ ရိုးသားစွာဖြင့် မိမိ အယူအဆများကို စာဖတ်သူများ နိုင်ငံရေးအသိ ပညာ တိုးပွါးပြီး ဆင်ခြင် တွေးတော နိုင်ကြစေရန် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
မိုက်ရိုင်းခွင့်၊ ဆဲဆိုခွင့် မရှိပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးနှင့် မြန်မာတို့သုတ၊ရသ တိုးပွါးစေမည့် ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး နှင့် သုတ၊ရသ-စာပေ အမျိုးမျိုး တို့ ကိုလည်း ဆက်လက်ပေးပို့ နိုင်ပါသည်။
စစ်အာဏာရှင်များကို ဆန့်ကျင်သည့် သဘောထားတခုတည်းကိုသာ တင်ဆက်သော၊ ဒီမိုလိုလား အတိုက်အခံ များ၏ မတူကွဲပြားသည့် အမြင်များကို မတင်ဆက်သော တခြားဆိုဒ်များကဲ့သို့ – ဟစ်တိုင် မကျင့်သုံးပါကြောင်း သိစေလိုပါသည်။
ဟစ်တိုင်သည် ဒီမို-လိုလားသူများ၏ မတူကွဲပြားသည့် အမြင်သဘောထားများကို စုစည်း တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
လူယဉ်ကျေး စာမူရှင်များကို အစဉ်လေးစားလျှက်–
အမှန်တရား မြတ်နိုးသူတိုင်း ဟစ်တိုင်ကို အားပေးမည်ဟု ယုံကြည်လျှက်ဖြင့်
အမှန်သစ္စာတရား ဘက်တော်သား-ဟစ်တိုင် ၀ိုင်းတော်သားမျာ့း 
ပြည်ပရောက် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်သားဟောင်းများအဖွဲ့၏ သတင်းမီဒီယာ ,
Posted: 25 May 2013 01:05 AM PDT
Posted: 25 May 2013 01:03 AM PDT
Terdapat spekulasi yang mengatakan pengasas SAMM che'GuBard telah ditahan. Ternyata spekulasi ini tidak benar dan sehingga jam6petang ini, che'GuBard masih bebas dan sedia untuk bersama rakyat dalam himpunan #SuaraRakyat505 yang dijadualkan bermula dalam masa 48 jam dari sekarang.
Posted: 25 May 2013 01:04 AM PDT
Solidariti Anak Muda Malaysia (SAMM) menegaskan bahawa perhimpunan yang dianjur oleh Gabungan "Suara Rakyat 505″ akan tetap diteruskan walaupun ramai pimpinan Pakatan Rakyat ditangkap. Himpunan ini adalah himpunan rakyat, semua yang hadir tanpa pangkat tetapi sebagai rakyat menuntut demokrasi yang dirampas regime legasi penjajah untuk kekal berkuasa.
SAMM juga sebagai antara penggerak utama himpunan #SuaraRakyat505 di Padang Timur (Amcorp Mall) tetap bertekad untuk memastikan himpunan mencapai matlamat, walaupun che'GuBard sendiri ditahan. Setakat ini juga, terdapat cubaan pihak polis untuk memberkas che'GuBard tetapi masih gagal.
Negara seolah-olah berada dalam keadaan 'belum merdeka' ketika mereka yang bersuara bercakap benar disumbatkan ke dalam lokap seterusnya didakwa atas akta yang sepatutnya telah dimansuhkan. Ini bukti kegagalan transformasi Najib, ketika kerajaan yang ada hari ini tidak punya sokongan majoriti.
Agenda dan tuntutan yang telah diumum oleh Gabungan "Suara Rakyat 505″ juga tidak berganjak, malah kehadiran orang ramai kini jauh di luar jangkaan setelah aksi gestapo yang ditunjuk oleh regim pemerintah, membuatkan rakyat lebih berani ke depan.
Posted: 25 May 2013 01:27 AM PDT
Gabungan "Suara Rakyat 505″
Gabungan 50 NGO "Suara Rakyat 505″ menyambut baik kenyataan Setiausaha Agong PAS pagi tadi. Ini menunjukkan PAS sebuah parti segar yang responsif dengan kehendak rakyat yang bangkit menentang penipuan PRU. #SuaraRakyat505 menghargai PAS yang telah mengeluarkan arahan ahlinya untuk bersama himpunan aman esok.
Segala persiapan sudah dirancang sebaiknya malah persediaan dari aspek keselamatan juga dibuat – satu pasukan khas perubatan dengan 55 orang doktor disediakan dan barisan peguam juga telah sedia bagi segala kemungkinan. Sekiranya berlaku penangkapan sila SMS dengan format nama/IC/Balai/tahap kecederaan kepada nombor-nombor berikut: 010-2142076, 017,3288794 dan 0128965727.
Jurucakap Gabungan 'Suara Rakyat 505′
Anggota Gabungan 'Suara Rakyat 505′
"Ia masih menunjukkan kelemahan PR untuk menjamin kesatuan dan kerjasama dalam memfokuskan sasaran dengan menumbangkan satu sahaja musuh; BN.
"Sehubungan itu, sudah sampai masanya, bagi PR terus menggasak ROS bagi meluluskan PR sebagai sebuah entiti dengan fokus 'satu parti, satu bendera, satu pengerusi dan satu manifesto," ujar Shamsul dalam ucapan dasarnya dalam Kongres AMK di Dewan Sivik Majlis Perbandaran Petaling Jaya (MBPJ) di sini.
Sebelum ini, PR mengemukakan permohonan pendaftarannya pada 2010 namun menghadapi halangan yang mana ROS mengkehendaki ia didaftar sebagai 'Pakatan Rakyat Malaysia'.
GB dah acapkali suarakan hal ini.
Sepatutnya pimpinan PR sudah heret ROS ke mahkamah kerana gagal mendaftarkan Pakatan Rakyat dengan memberikan PR pelbagai alasan yang karut-marut.
Petikan ulasan GB sebelum ini:
Melambat-lambatkan pendaftaran Pakatan Rakyat adalah strategi jahat yang digunakan oleh RoS supaya Pakatan Rakyat tidak dapat menggunakan nama parti itu untuk bertanding di dalam pilihanraya.
Pakatan Rakyat PERLU mengheret RoS ke muka pengadilan dan pihak pendaftar RoS perlu dihukum oleh mahkamah kerana strategi jahatnya itu yang bertindak secara diskriminasi dan pilih kasih.
Posted: 24 May 2013 09:34 PM PDT
He tried to hide the truce with Najib but the man who 'brokered' the deal just could not contain his frustration anymore. Finally, he burst out and slammed Anwar for failing to comply.
Mr. Najib stressed reconciliation in his first public remarks after the election, though both sides said that the other had rejectedaclause in the pact that the winner was to offer the loserarole ina"reconciliation government."
Mr. Kalla said that the outcome of the balloting, held onaSunday, was clear. "We hadacommitment,'' he said. "On Monday, I asked Anwar to accept it and look at reality. But they said, 'No, no, no, no.' ''
Posted: 24 May 2013 11:03 PM PDT
Pontian - Sebuah keluarga dari Benut di sini, berdepan detik cemas apabila kediaman mereka dimasuki seorang lelaki yang hanya berseluar dalam bersenjatakan pisau dalam kejadian jam4pagi, Selasa lalu.
"Anak kedua saya, Nur Farahin, menjerit memberitahu kakaknya sudah tiada dan memberitahu ada orang datang ke bilik mereka.
"Puas saya mencari Amalia di dalam rumah, tetapi tidak jumpa," katanya kepada Sinar Harian di sini, semalam.
"Saya dapati anak saya ditinggalkan seorang diri di kawasan belakang rumah dan menangis, namun tidak cedera," katanya.
"Saya syak perompak tersebut masuk melalui tingkap kerana tiada kesan umpil pada pintu. Saya kemudiannya membuat laporan polis di Balai Polis Benut," katanya.
Posted: 24 May 2013 08:12 PM PDT
Posted: 24 May 2013 07:00 PM PDT
Posted: 24 May 2013 06:07 PM PDT
COMMENT Do you remember playing Police and Thief as kids?
Last Wednesday night,amuch more brutal version of this game played out in Jinjang, as it has so many times before in Petaling Jaya, Brickfields, at Bersih rallies and so on. Many Malaysians are no strangers to candlelight vigils outside police stations. I remember the candlelight vigils in Petaling Jaya during the 2008 ISA arrests, which themselves led to both more arrests and more candlelight vigils that same night, outside the PJ police station.
There, like in Jinjang, or Brickfields when Wong Chin Huat was detained or during Bersih 3.0, police gave orders to disperse, crowds disperse, and police unleash their fury on the dispersing crowd anyway. The pattern is the same: unarmed, peaceful citizens, being run down by rabid police officers who act as if they had been attacked and who can't seem to tell the difference betweenacandle andaparang. It's very depressing to face these police charges. I remember thinking one of those nights in Petaling Jaya long ago - one day, we will stop running. One day, we will draw the line.
Unfortunately, May 5, 2013 was not that day, and so the police chase on, and the rakyat suffer on.
Bullying vs real strength
Whatastart to the respective reigns of Home Minister Zahid Hamidi and IGP Khalid Abu Bakar. Barelyaweek or two after being sworn in, and already there isacrackdown on these "enemies of the state" - Adam Adli, Tian Chua, Haris Ibrahim, Tamrin Ghafar, and who knows who else next. Voltaire did not actually write or say "I may disagree with what you say, but I will defend to the death your right to say it" (that wasasummary of his views by Evelyn Beatrice Hall), but the axiom seems to apply here.
Pakatan Rakyat's top leaders have wisely distanced themselves from any talk of bringing down the government by force. I don't subscribe to suchanotion either. Nevertheless, I think it's clear that this heavy-handed police reaction betraysasense of insecurity more than anything else. Both Zahid (left) and Khalid appear to enjoy cultivating some ridiculous tough guy image. The truth of it though is that people with real strength never need to try and flaunt it so blatantly.
After all, which demonstrates true strength? Coming down hard on every single person who says what he or she believes? Or offering more attractive alternatives in the free marketplace of ideas?
Of course, Zahid's idea of discourse is: If you don't like it here, you can bloody well leave. Inacabinet full of disappointments, his and Hishammuddin Hussein's are among the worst. These are the two people most responsible for the tragic fiasco in Lahad Datu that resulted in the death of so many service personnel. Is Najib's idea of improvement and transformation keeping the nett composition of that team exactly the same?
An obvious likelihood is that Zahid is looking to shore up his own image ahead of the Umno elections. How disgusting that one should use the full weight of the state's enforcement agencies against normal citizens just so he can look tough to his fellow sycophants. It seems I cannot avoid writing about one Tan Sri Khalid or another. The current IGP is remembered well among observers for his arrogant denials and blind defense of the police in cases like Aminulrasyid Amzah and A Kugan, the former in which he shot his mouth off about parangs that proved (once again) to be non-existent.
Where the last IGP was grownabit more inagentleman's mould, with some reputation for being able to be reasonable, the current one is clearly more hawk than dove. He has saidanumber of words about refocusing on crime prevention, but those for now remain words (only this last week,afriend and fellow Malaysiakini contributor lost her laptop and other valuables the same way I didafew years back, via smash theft).
It seems unlikely the already stretched police force can concentrate effectively on both crime prevention and intimidating activists at the same time.
Injustice ferments discontent
The brutal death of N Dharmendran in police custody proved another low point right at the beginning of IGP Khalid's term. The former's death was determined by pathologists to be the result of blunt force trauma, and his body bore marks of being beaten, stapled (of all things), and whipped byarotan. Who knows how many people suffer but survive this kind of treatment at the hands of the police? ClearlyaBN win has signaled to the police that they can continue on with business as usual.
The only positive development for now is that the police have classified this case as murder. Only time will tell whether this will eventually result in some real justice, or whether it is merely another mummer's farce that will end in no meaningful action. Among the recent arrestees were men who refused to accept the results of the last general elections. If the prime minister continues to fail on delivering on his reforms, persists in making us suffer these injustices, and insists on making peaceful revolutions impossible, we cannot be surprised if five more take the place of every person thrown into jail.
Posted: 24 May 2013 08:00 PM PDT
Cadangan BN parti tunggal adalah rasional
PHUKET: Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata cadangan untuk menjadikan Barisan Nasional (BN) sebagai parti tunggal adalah rasional dan perlu dikaji secara mendalam untuk kesinambungan sokongan rakyat pada masa depan.
"Kita tidak mahu berselindung, kita hendak tahu apakah sebab kita menang atau kalah, apa faktor yang menyebabkan kemenangan dan kekalahan, dan lebih lanjut daripada itu adalah perakuan-perakuan yang kita akan buat untuk menentukan supaya BN terus relevan dan bagaimana kita menangani tempoh lima tahun sebelum menghadapi pilihan raya umum akan datang," katanya. – Bernama
Posted: 24 May 2013 04:52 PM PDT
by Dominic Evans for Reuters, May 24
TRIPOLI, Lebanon (Reuters) - A Syrian-born Islamist cleric who taught one of the men accused of hacking to death an off-duty British soldier onaLondon street praised the attack for its "courage" and said Muslims would see it asastrike onamilitary target. In an interview in Tripoli, northern Lebanon, where he has lived since being banished from Britain in 2005, Omar Bakri, founder of banned British Islamist group Al Muhajiroun, said he knew suspect Michael Adebolajo from his lecturesadecade ago. "When I saw the footage I recognized the face immediately," Bakri told Reuters. "I used to know him. A quiet man, very shy, asking lots of questions about Islam." "What surprised me (is) the quiet man, the man who is very shy, decided to carry out an attack againstaBritish soldier in the middle of the day in the middle ofastreet in the UK. In east London. It's incredible.
"When I saw that, honestly I was very surprised - standing firm, courageous, brave. Not running away. Rather, he said why he carried (it out) and he wanted the whole world to hear it." Read it all here...